Calanka Puntland oo hoos loo dhigay, ka dib geeridii naxdinta lahayd ee M/weyne C/laahi Yuusuf. – Radio Daljir
Garoowe, Mar, 23 – M/weynaha dawladda Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole oo shir jaraa?id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in muddo sadex cisho hoos loo dhigay calanka Puntland geerida ku timid M/weynihii hore ee Somaliya C/laahi Yuusuf Axmed aw-geed. Wuxuuna intaasi raaciyey in marxuunka lagu aasi doo deegaanada Puntland.
Md. Faroole ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray dhamaamba umadda Soomaliyeed waxaana uu si gaar ugu tacsiyeeyey eheladii marxuunka oo uu sheegay inuu telefoon kula hadlay.
M/weyne Faroole ayaa sheegay in M/weyne C/laahi Yuusuf uu ahaa nin miisaan wayn ku dhex leh umadda Soomaliyeed ayna geeridu tahay mid xaq ah oo qof walba sugeysa.